Liver and the H – bomb
နွေရက်တွေဆီ တကျော့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ အခုလိုနွေကာလမှာ ကျရောက်ဖြစ်ပွါးလာတတ်သော၊ အန္တရာယ်ကြီးလှသည့် ရောဂါတွေကို သတိထား စောင့်ကြည့်ရမည့် ကာလလည်းဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံး ရောဂါများ စာရင်းဝင် ရောဂါတခုကား Hepatitis လို့ ခေါ်တဲ့ အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရောဂါမှာ အသည်းတမုဟုတ်ခြင်း (ကြီးထွား) ရောင်ရမ်းလာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ဖြစ်ရသည့် အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းတရားက ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက် ၀င်ရောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်သတ္တုများနှင့် အရက်သေစာ အပါအ၀င် ဥပါဒ်ဖြစ်စေနိုင်လောက်သည့် ဒြပ်ဝတ်ထုများနှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် အသည်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးဆက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ပါဝင်သည့် ဗိုင်းရပ်ပိုး၏ အမျိုးအစားအလိုက် - အသားဝါဗိုင်းရပ်ကို အေ- ဘီ- စီ- ဒီ နှင့် အီး ဟူ၍ ငါးမျိုးခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကြီး၏ အဆိုအရ - ရောဂါပိုးအမျိုးအစား ငါးမျိုးစုံလုံးကြောင့် ဖြစ်ရသည့် နေထိုင်မကောင်းခြင်းနှင့် အသက်သေဆုံးခြင်း (တို့ကြောင့် ဖြေရှင်းရသည့်)-၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးမားသည်။ ရုတ်တရက် ရောဂါထဖြစ်တတ်ပြီး၊ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်သည့် အလားအလာရှိသည့်ဖြင့်လည်း ပိုးအလိုက် ရောဂါငါးမျိုးလုံးမှာ အစိုးရိမ်ရဆုံးအဖြစ် စောင့်ကြည့်ရန် အလိုအပ်ဆုံးချည်းဖြစ်ကြသည် ဆိုပါသည်။ အသားဝါဖြစ်ပြီဆိုလျှင် စူးအောင့်သလို ခံစားတတ်ရပြီး၊ နာတာရှည် ဝေဒနာတရပ်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။ တခါတရံတွင် ဘာမျှထိခိုက်နစ်နာရခြင်း မရှိသော်လည်း၊ (စက်ပုန်းခုတ်နေတတ်သည့် ဤရောဂါဆိုး ဖြစ်နေပြီ ဆိုပါက) အသည်းကို ထိခိုက်။ ဆုံးရှုံးရခြင်း၊ အသည်းပျက်စီးခြင်းအပြင်၊ အသည်းကင်ဆာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။
ဤရောဂါသည် မသန့်သောရေနှင့် အစားအစာများကို စားသောက်မိခြင်းနှင့် တခါတရံ- လိင်ဆက်ဆံရာမှတဆင့် ကူးစက်တတ်ပါသည်။ ပိုးက သာမန်အားဖြင့် မပြင်းထန်လှသော်လည်း ယင်းသည် ဝေဒနာ့ရှင်၏ ဘ၀တစ်ခုလုံး ပျက်စီးရသည့်အထိ ကြောက်စရာ ကောင်းလှပါဘိသည်။
ဤဗိုင်းရပ်ကို သွေးနှင့် သွေးရည်များ (ဥပမာ - သုက်ရည် သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးအင်္ဂါမှအရည်) တို့တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အဆိုပါဗိုင်းရပ်ပိုးသည် - အကာကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ဆေးထိုးအပ် တစ်ချောင်းတည်းကို ဝေမျှ သုံးစွဲကြခြင်းနှင့် သွေးသွင်းခြင်းတို့မှ တဆင့်ကူးစက်နိုင်သည်။ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်နိုင်ခြေရှိသည့် မိခင်မှတဆင့် ကလေးငယ်သို့လည်း ကူးစက်နိုင်သည်။
ဤဗိုင်းရပ်ကို သွေး၊ တစ်သျှူး နှင့် သုက်ရည် (သိုမဟုတ်) အမျိုးသမီးအင်္ဂါမှ အရည်တို့တွင် တွေ့ရသည်။ သွေးသွင်းခြင်း၊ ဆေးထိုအပ်တစ်ချောင်တည်းကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း အပါအ၀င် သွေးမှတဆင့် သွေးသို့ ကူးစက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့်လည်း တခါတရံတွင် ဖြစ်ပွါးနိုင်ခြေရှိပေသည်။
ဤဗိုင်းရပ်က အသားဝါ (ဘီ) ပိုးအခံရှိပြီးသူမျိုးကို ကူးစက်နိုင်သည်။ ပိုးနှစ်မျိုးစုံလုံး (ဘီနှင့် ဒီ) ကူးစက်ခံရမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ဤဗိုင်းရပ်က မသန့်ရှင်းသော ရေနှင့် အစားအသောက်တို့တွင် ပါဝင်ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တိုးတက်နေသော ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကြီးးတွင် ဤပုံစံဖြင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ပုံ အကြောင်းတရားမှာ အလွန်ရိုးစင်လှပေသည်။
- အသည်း၏ အလိုအလျောက် ရောဂါပြီးစံနစ် ပျက်ပြားခြင်း၊
- ရောဂါပိုး (သို့မဟုတ်) ကပ်ပါးရောဂါပိုးများ ကူးစက်ခံရခြင်း၊
- အရက်အဆိပ်သင့်ခြင်းမှ - အသည်းကို ထိခိုက်ခြင်း၊
- ပါရာစီတမော့လ်ကဲသို့ ဆေးဝါးများ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်း၊
- အကျိတ် တစ်သျှူး ပျက်စီးခြင်း၊
- ဟဲယမိုခရိုမစ်တစ်ဆစ် ခေါ် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အနေအထားမကျသော သံဓါတ်လွန်ကဲခြင်း၊
- ၀ီလ်ဆင် ရောဂါခေါ် (ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အနေအထားမကျသော သွေးဖြူဥ လန်ကဲခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ရောဂါဖြစ်စဉ် အတော်များများတွင် - အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါသည် အချိန်အတော်ကြာ၊ အထင်ကရ ရောဂါလက္ခဏာ မပြမူ၍ (အတွင်းတွင်ဝပ်၍ စက်ပုန်းခုတ်နေတတ်သည်)။ သို့ဖြစ်၍လည်း လူအများသည် မိမိရောဂါကူးစက်ခံရမှန်း မသိပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
- သည်းခြေရောင်ခြင်းကြောင့် အရေပြားနှင့် မျက်စိများ အ၀ါရောင်ဖြစ်ခြင်း၊
- ဆီးရည် အနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်း၊
- မစင် -ဖျော့တော့၍ ရွှံ့ စေးရောင်ရှိခြင်း၊
- သက်တောင့်သက်သာမရှိ၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊
- အော်ကလီဆန်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊
- ၀မ်းဗိုက်နာခြင်း၊ (သို့မဟုတ်)၀မ်းဗိုက်ဖောင်း၊ ပွကားလာခြင်း၊
- (အမျိုးသားများတွင်) ရင်သားကြီးလာခြင်း၊
- မျိုးပွါးအင်္ဂါများ ယားယံခြင်း၊
- ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ခြင်း၊
- ကြွက်သားနှင့် အဆစ်များ နာကျင်ခြင်း၊
- ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ၊ တနေကုန်လို မောပမ်းနေတတ်ခြင်း၊
- သရက်ရွက်နှင့် အသည်းကြီးမားလာခြင်း၊
- အသည်းကြီးခြင်းနှင့် ပျော့ပျောင်းခြင်း၊
- ၀မ်းဗိုက်ထဲမှ (အရည်၊ မတည်မငြိမ်)လှုပ်ရှားခြင်း၊
- အသားရောင် ၀ါကျင်ကျင်ဖြစ်လာခြင်း တို့ကို ကြည့်ကြပ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
ဓါတ်ခွဲခန်းမှ - စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေးချက်များ -
- အသည်း၏ လုပ်ငန်းအပေါ် စမ်းသပ်ချက်၊
- ၀မ်းဗိုက်ကို အယ်လ်တရာဆောင်း (တီဗွီ)ရိုက်ကူးကြည့်ခြင်း၊
- ရောဂါပြီးစနစ်ဆိုင်ရာ သွေးကလာပ်စည်းကို စစ်ဆေး၍ အမှတ်အသားပြုခြင်း၊
- အသားဝါရောဂါ ဗိုင်းရပ် အတွက် (သွေးခဲ၊ သားငံရည်)ကို စမ်းသပ်ခြင်း
- အသည်းမှအသားနမူနာကို အဏုဇီဝဗေဒနည်းဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊
- ၀မ်းဗိုက်ထဲမှ အရည်များကို စမ်းသပ်ရန် ဖောက်ထုတ်ယူခြင်း၊
(အောက်ပါ ရှေးပြေးလက္ခဏာများတွေ့ရသဖြင့် - အကယ်၍ သင့်မှာ အသားဝါ အသည်းရောင် ဖြစ်နေပြီဟု သံသယဖြစ်လျှင် ဆေးကုခံယူပါ..
- ၀မ်းထဲ၌ သွေးပါခြင်း၊ သို့မဟုတ် - ၀မ်းချုပ်ခြင်း၊
- အန်လွန်းသဖြင့် အစာကို မထိမ်းနိုင်ခြင်း၊ (အစာကိုမထိမ်းနိုင်သည့်အထိ အန်လွန်းခြင်း)။
တားမြစ် (ကြိုတင် ကာကွယ်) ခြင်း
- အသည်းရောင်၊ အသားဝါ အေနှင့် ဘီကို ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်နိင်သည်၊
- နေ့စဉ်ဘ၀နေထိုင်ပုံများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆင်ခြင်- ဆောင် ရှောင်နိုင်သည် - မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားစသည့် ပစ္စည်းမျိုးကို အများနှင့် မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်ရန်၊
- ဆေးထိုးအပ်ကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊
- ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်ကျသည့် သွေးအစနများကို အစဉ်သဖြင့် သန့်ဇင်ရန်၊
- သွေးပေါက်သည့်အထိ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်းကို ဆင်ခြင်ရန်၊
- ထိရောက်သော ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် အခြေနေများကို လိုက်နာကျင့်ဆောင်ပါ၊
- မသန့်သော အစာအစာနှင့် သောက်ရေကို ရှောင်ပါ။
- အရက်သေစာကို ရှောင် သို့မဟုတ် လျှော့သောက်ပါ။
- ဆရာဝန့် ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာ မည်သည့်ဆေးမျိုးကိုမဆို သုံးစွဲရန်။
Ref: Livever and the H-Bomb, text by Ajish P. Joy & graphips by Deni Lal, The Week, Health, April 20,2014
ဆူရပ်ရ်ှမဟတ္တရသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာပြီး မောပန်းလာသည်။ အလုပ်လုပ်ယင်း တစ်ချိန်လုံးလိုလို စိတ်ထဲ ကသိကအောက်ဖြစ်လာသည်။ မအားမလပ် လုပ်နေရသည့် အလုပ်တာဝန်တွေကြောင့်၊ ၁၈ နာရီလုံးလုံး အလုပ်တွေလုပ်နေရသည့်အတွက်ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်မည်ဟုစဉ်စားပြီး ထိုမောပန်းမှု၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာမှုများကို ခေါင်းထဲမထည့်ဘဲ ဘေးချိတ်ထားလိုက်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မွန်ဘိုင်းမှ မိမိကိုယ်တိုင် ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆူရပ်ရှ် မဟတ္တရမှာ ရေသောက်ယင်း ရေငတ်မပြေဖြစ်လာသည်။ သူသည် ရေငတ်ပြေမလားဆိုပြီး ရေများ အချိုရည်များ တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက်ရေတွက်မရအောင် သောက်ကြည့်သည်။ သို့ရာတွင် မျက်စိ အမြင်အာရုံများ မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်လာသောအခါကျမှ မျက်စိဆရာဝန်ဆီကို သွားပြလိုက်သည်။
မျက်စိဆရာဝန် စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ သူ့၏စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်အရ မဟတ္ထရ၏ မျက်လုံးများမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ ဆီးချိုရောဂါ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် မျက်ကြည်လွှာများပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါမှာ ပြန်၍ကောင်းအောင် ကုသ၍မရသော ရောဂါဖြစ်သည်။ လေဆာဖြင့် ကုသကြည့်သော်လည်း မျက်စိတစ်ဖက်မှာ အမြင်အာရုံများ ဆုံးရှုံးသွားပြီး၊ ကျန်မျက်စိတစ်လုံးမှာ မြင်ရုံမျှသာဖြစ်သွားသည်။
ဆူရပ်ရ်ှမဟတ္ထရသည် သူ၏ရောဂါလက္ခဏာကို စစ်ဆေးကြည့်သည်မှာ အလွန်နောက်ကျသွားခဲ့သည်။ ဆီးချိုရောဂါသည် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မျက်ကြည်လွှာများပျက်စီးသွားသောကြောင့် မျက်စိများကန်းသွားကြသော်လည်း အမြင်အာရုံများ ဆုံးရှုံးသွားစရာ အကြောင်းမရှိပါ။” ကျွန်တော်တို့ဟာ မျက်လုံးတွေကန်းမသွားအောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်၊ တကယ်လို့လူနာက ကျွန်တော်တို့ဆီကို စောစောစီးစီး ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်ဆိုယင် အသက်ကိုတောင် ကယ်နိုင်ပါတယ်” ဟု မွန်ဘိုင်းမြို့Jaslok ဆေးရုံမှ ဒေါက်တာ Shaukat sadikot ကပြောသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းကြသည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆီးချိုရောဂါသည် ၃၃ သန်းလောက်တွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်သည် သူတို့မှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေကြောင်းကို မသိကြဟုဆိုပါသည်။ မွန်ဘိုင်းမြို့ S.L Raheja ဆေးရုံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆီးချိုဌာန၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆီးချိုရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာ Pradeep G. Talwalker,ကမူ “ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေတာဟာ ဒီထက်မကများပြားနိုင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကလဲ တအားကြီးခေတ်စားနေတယ်လေ” ဟုဆိုပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သက္ကရာဇ် ၂၀၂၅ ခုနှစ်ရောက်လျှင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆီးချိုရောဂါသည်ပေါင်း ၅၇ သန်းထက်မက များပြားလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ “အဲဒီအခါကျယင် ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံးရဲ့ ဆီးချိုရောဂါသည် လေးယောက်အနက် တစ်ယောက်ဟာ အိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံက လူနာကုတင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆီးချိုရောဂါသည်တွေက အပိုင်စီးထားကြတယ်လေ၊ ဆီးချိုရောဂါ ကုသရတာ ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပေမယ့် အဲဒါ တကယ်များပြားနိုင်ပါတယ်” ဟု ရှန်နိုင်းမြို့ ဆီးချိုရောဂါသုတေသနဌာနညွှန်ကြားရေးမှုးနှင့် M.Vဆေးရုံမှ ဆီးချိုရောဂါကု ဒေါက်တာ A Ramachandran ကပြောပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ သွေးထဲတွင် သကြား (အချို) ဓာတ်လွန်ကဲမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် အင်ဆူလင် ဟော်မုနုးက သွေးထဲရှိ သကြားဓာတ်များကို ခွန်အားအဖြစ် ချက်ချင်းပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ထိုသကြားဓာတ်များကို ဆဲလ်ထဲသို့ပို့ပေးလိုက်သည်။ သို့ရာတွင် အင်ဆူလင် လုံလုံလောက်လောက် ထုတ်မပေးနိုင်သည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် အင်ဆူလင်က ကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အခါ သွေးထဲတွင် သကြားဓာတ်များ ကြွင်းကျန်နေတတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သွေးထဲတွင် သကြားဓာတ်များ ကျန်နေလျှင် သွေးကြောများ၊ အာရုံကြောများနှင့် တစ်ရှုးများကို ထိခိုက်ပျက်စီးသွားစေပါသည်။
ငါးရာခိုင်နှုန်းအောက်နည်းသော အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆီးချိုရောဂါသည်အများစုမှာ ကလေးငယ်များနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များသာ အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့တွင် အစာကို ချေဖျက်သည့် အင်ဆူလင်ကထုတ်လုပ်ပေးသည့် ဆဲလ်များ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ အင်ဆူလင်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ဆီးချိုရောဂါမျိုးကို အမျိုးအစား (၁) ဟုခေါ်ကြသည်။ သူတို့သည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အင်ဆူလင် ထိုးမပေးလျှင် သေသွားနိုင်သူများဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဆူရပ်ရ်ှမဟတ္ထရကဲ့သို့ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါခံစားရသည့် အများစုမှာ အင်ဆူလင်အချို့ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်ဆိုသော်ငြားလည်း သကြားဓာတ်ကို လုံလောက်စွာ ချေဖျက်နိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့် သကြားဓာတ်များ ကြွင်းကျန်နေတတ်သည်။ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါကို ယခင်က နောက်ဆုံးပေါ် ဆီးချိုရောဂါဟုသိထားကြသည်။ ယင်းအမျိုးအစား (၂) သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အသက် ၄၀ နောက်ပိုင်း အိန္ဒိယလူမျိုးများ အဖြစ်များကြသည့် ရောဂါဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန်အားဖြင့် အသက်၅၀ အရွယ်တွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ဥရောပသားများနှင့်စာလျှင် သိသိသာသာကြီးနည်းပါးနေသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
“အမှန်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုယင်တော့ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေက မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ဆီးချိုရောဂါက ပိုများပါတယ် “ဟု ပုနေးမြို့ KEM ဆေးရုံမှ ဆီးချိုရောဂါ သုတေသန အဖွဲ့မှ ဒေါက်တာ C.S.Yajnik ကပြောပြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆီးချိုရောဂါကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကပင် ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ” ဆီးချိုရောဂါနဲ့ဆက်စပ်လို့ အာယုဗေဒဆေးပညာအရ သုံးမျိုးသုံးစား ဖေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်၊ အာယုဗေဒဆေးပညာရှင်တွေက ရောဂါလက္ခဏာများနဲ့ ရောဂါအမျိုးအစားကွဲပြားပုံ၊ ပြီးတော့ အဲဒီရောဂါကို ကုသပုံကုသနည်းတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ် “ဟု မွန်ဘိုင်းမြို့ ဆေးပညာဆိုင်ရာသုတေသန ညွန်ကြားရေးမှုး ဒေါက်တာ Ashok B. Vaidya ကမှတ်ချက်ပြုသည်။
သကြားဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်၍ မနိုင်ခြင်းသည် ရောဂါမျိုးစုံကို ဖြစ်ပွားစေတတ်ပါသည်။ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းအပါအ၀င် ထိုဆီးချိုရောဂါက လူနာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို သေစေတတ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါကြောင့် နှလုံးရောဂါကို နှစ်ဆကနေ လေးဆအထိဖြစ်ပွားစေတတ်ပါသည်။ အာရုံကြောများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ခြေဖျား လက်ဖျားများတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပွားလျှင် ကုသရန်အလွန်ခက်ခဲပြီး ခြေထောက်တွင် အနာက တာရှည်ဖြစ်ပွားကာ နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းခြေလက်အင်္ဂါများကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရပါသည်။ အမှန်အားဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆီးချိုရောဂါမှာ ခြေလက်အင်္ဂါများကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါဖြစ်သောလူအချို့တွင်၊ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရောဂါ အကြာကြီးခံစားရသူများတွင် အာရုံကြောများ၊ သွေးပြန်ကြောများ ပျက်စီးသွားသောကြောင့် အင်အားများဆုတ်ယုတ်သွားရလေသည်။ “သွေးချိုခြင်းကို ထိန်းပေးခြင်းဖြင့် တစ်ခြားကုသမှုတွေ၊ ပြီးတော့ နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို တိုတိုနဲ့ဖြတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ပုနေးမြို့ဆီးချိုရောဂါသုတေသန အဖွဲ့၊ KEM ဆေးရုံမှ ဒေါက်တာ K.M.Shelgikar ကဆိုပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါဖြစ်လျှင် ဆူရပ်ရှ် မဟတ္တရ၏ အဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့ မျက်ကြည်လွှာရှိ သေးငယ်သော သွေးကြောများနှင့် မျက်လုံးနောက်ခံများကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်။ အမှန်းအားဖြင့် မျက်ကြည်လွှာများ ပျက်စီးပြီး မျက်လုံးများကန်းသွားခြင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ မြို့ပြဒေသအကြားတွင် အဖြစ်များပါသည်။ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကို လေဆာဖြင့်ကုပြီး တားမြစ်နိုင်သော်လည်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်လောက်မှာ မျက်ကြည်လွှားများ ပျက်စီးသွားပြီးမှ ရောဂါကိုစစ်တမ်းထုတ်ကြသူများဖြစ်သည်။ သွေးချိုခြင်းကို မထိန်းနိုင်ခြင်း၏ အဓိကအရေးကြီးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကုသနိုင်သည်ထက် စောစီးစွာ ရောဂါကို သတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိကကျသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ပြောသလောက် လွယ်ကူသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ “ဆီးချိုရောဂါရဲ့ မီးနီပြတာကို လူတော်တော်များက သိအောင်မလုပ်ကြသလို ဆီးချိုရောဂါသည် ထက်ဝက်နီးပါးလောက်ဟာလဲ စောစောပိုင်းအဆင့်မှာ ရောဂါလက္ခဏာကို မသိနိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ် “ဟု ဒေါက်တာ Ramachandran ကဆိုပါသည်။
မျိုးရိုးကိုအခြေခံပြီး ရောဂါဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း ရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းသည် ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ Ramachandran ၏ အဆိုအရ အကယ်၍ လင်နှင့် မယားနှစ်ယောက်စလုံးတွင် ဆီးချိုရောဂါရှိသည်ဆိုလျှင် သူတို့၏ ကလေးငယ်များမှာလည်း ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားရန် အလားအလာမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟုသိရပါသည်။ တစ်ခြားအကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပွားရခြင်းလည်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းသည် အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ဖင်လန်နိုင်ငံမှ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အသက် ၄၂နှစ်မှ အသက် ၆၀ရှိ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မရှိသူများသည် ရက်သတ္တ တစ်ပတ်လျင် အနည်းဆုံး မိနစ် ၄၀ လောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူများထက် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ရန် အလားအလာ နှစ်ဆပိုများသည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
နောက်ထပ် ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ရန် အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အ၀လွန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အိန္ဒိယလူမျိုး ဆီးချိုရောဂါသည် အများစုမှာ ၀သူများမဟုတ်ကြပါ။ များများဝလေ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် သကြားဓာတ်များကို ညီမျှအောင်ထိန်းပေးဖို့အတွက် အင်ဆူလင် များများလိုအပ်လေလေဖြစ်သည့်အပြင် အားစိုက်ခြင်းကြောင့် အစာကိုကြေအောင်လုပ်သည့် ဂလင်းများ ပို၍အားနည်းလေလေဖြစ်သည်။
မွန်ဘိုင်းမြို့မှ မီဒီယာလုပ်ငန်း အလုပ်အမှုဆောင် အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိ ပရန်နေဂျလန်းသည် ကီလို ၉၉ရှိပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခဲ့သည်။ သူသည် စတင်ပြီး အသက်ရှု၍ မ၀ဘဲ မောဟိုက်ယင်း မောလာသည်။ ပြီးလျှင် မကြာခဏ ရေချိုးခန်းထဲသွားနေရသည်။ ပရန်နေသည် အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်းတွင် သွားပြသည်။ သူ၏သွေးချိုးအဆင့်မှာ ၆၃၈ ရှိပြီး ၄င်းမှာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့် အနေအထားကို ရောက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရလေသည်။ သူ့အား ဒေါက်တာ H.B Chandalia ထံတွင် ချက်ချင်းသွားပြရန်န်ညွန်ကြားလိုက်သည်။ ဒေါက်တာChandalia က ချက်ချင်းဆိုသလို ပရန်နေကို အင်ဆူလင်စတင်ထိုးပေးပြီး ဆီးချိုကြောင့် coma သတိမေ့မှုများဖြစ်လာခဲ့လျှင် ဟူသော သဘောဖြင့်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန် ဆေးရုံတက်ခိုင်းလိုက်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ပရန်နေး၏ သွေးချို အဆင့်မှာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း မြင့်တက်မလာဘဲ ပုံမှန်အနေအထားဖြစ်သွားသည်။ သူ့ကိုဆေးရုံမှ ဆင်းခိုင်းပြီး ဒေါက်တာ Chandalia က သူ့အား အစားအသောက် ရှောင်ကြည်ဖို့၊ ဆေးဝါးများမှန်မှန်သောက်ဖို့ မှာလိုက်သည်။ အခုအခါ ပရန်နေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၈၅ ကီလိုသို့ ကျသွားသည်။ သူသည် ဆေးသောက်ခြင်းကို ဖြတ်လိုက်သည်။ အကြောင်းမှာ သူ၏သွေးချိုမှာ နောက်ဆုံး မှတ်တမ်းအရ ၁၀၂ ရှိပြီး အစားအသောက်ကို ရှောင်ကြည်ကာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်ယင်း သွေးချိုခြင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထိန်းနိုင်သွားသည်။ သူသည် တစ်နေ့ကို ရှစ်ကီလိုမီတာပြေးသည်၊ ထိုနောက် ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်သွားသည်။
အဆီများလွန်းခြင်းသည်လည်း အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ရန် နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည် စောစီးစွာ ရောဂါလက္ခဏာကို ပြဖို့ အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း သွေးချိုမြင့်တက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား (၂) ဖြစ်လာရန်အလားအလာကို ညွန်ပြတတ်သည်။
ဟီတယ်လ် မတ်သာသည် အသက် ၃၀ တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရသောအခါ လုပ်နေကျဖြစ်သည့် သွေးစစ်ဆေးမှုက သူမ၏သွေးချိုမှာ မသိမသာမြင့်တတ်နေကြောင်း ပြသလေသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ သူမ၏ အဖေတွင် ဆီးချိုရှိခြင်းကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် သူမသည်လည်း ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ရန်အလားအလာရှိကြောင်းကို သိထားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူမ၏ကလေးငယ် တစ်နှစ်ခွဲကျော်သည်အထိ သူမမှာ မည်သည့် ရောဂါလက္ခဏကိုမျှ ခံစားရခြင်းမရှိပါ။ ထို့နောက် သူမသည် အလွယ်တကူပင် မောပန်းလာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်သောအခါ ဟီတယ်လ်၏ သွေးချိုမှာ ၂၉၂ အထိမြင့်တက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူမ၏ ဆရာဝန်က သူမအား အချိုနှင့် အကျော်အလှော်အစားအစားများကို ရှောင်ရန် အကြံပြုလိုက်သည်။ ထို့အပြင် ဆေးများသောက်ရန်မှာကြားလိုက်သည်။ ဟီတယ်လ်၏ သွေးချိုမှာ ပြန်လည်ကျသွားပြီး သူမသည် ယခင်ထက်ပို၍နေကောင်းသွားသည်။
အကြောင်းမှ ဟီတယ်လ်သည် ရောဂါလက္ခဏာကို ပထမဆုံးတွေ့ရှိလိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်း ဆရာဝန်ကို သွားပြနိုင်လိုက်သောကြောင့် သူမတွင် အမြင်အာရုံများ ဆုံးရှုံးမှုလည်း မရှိသလို ကိုယ်လက်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ရခြင်းလည်းမရှိပါ။ သူမသည် ကံကောင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ “သူတို့ရောဂါကို စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ အနည်းဆုံး ဆီးချိုလူနာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ သူတို့မှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်၊ ဥပမာ သွေးတိုးတာ၊ ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါပိုးတွေဝင်တာ၊ ပြီးတော့ တစ်ရှုးတွေပျက်စီးသွားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ အဓိပ္ပါယ်က ဘာပြောသလဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ မိမိရဲ့ရောဂါလက္ခဏာကို စစ်ဆေးမကြည့်တာဟာ ၁၀ နှစ်ထက်မက ကြာပြီဆိုတာကို ဖေါ်ပြနေတဲ့သဘောပါ” ဟု ဒေါက်တာ Ramachandran ကပြောပါသည်။ “တုန့်ဆိုင်း တုန့်ဆိုင်းလုပ်မနေပါနဲ့၊ တကယ်လို့ ကိုယ့်မိသာစုထဲမှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်သူတစ်ယောက်ယောက် ရှိလာခဲ့ယင်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်မယ့်လက္ခဏာကိုတွေ့လာရတယ် ဆိုယင် ဆရာဝန်ဆီကို ချက်ချင်းသွားပြပါ” ဟုသူက သတိပေးပြောကြားပါသည်။
“တကယ်တော့ အသက် ၃၀ ကျော်လာယင် လူတိုင်းဟာ မိမိမှာဆီးချိုရောဂါရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုကိုလုပ်သင့်ပါတယ်၊ ဆီးစစ်တာ သွားမလုပ်ပါနဲ့၊ အဲဒါ ဘာမှ မထိရောက်ဘူး၊ သွေးစစ်တာဟာ ဆီးကိုစစ်တာထက် အများကြီး တိကျပါတယ် “ဟု ဒေါက်တာ Sadikot ကပြောပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါရှိသည့် လူနာတစ်ယောက်သည် ဆေးတစ်ကြိမ်စစ်ပြီးရောဂါရှိမှန်းသိရလျှင် ၄င်း၏လိုအပ်ချက်အလိုက် ဆီးထဲတွင် ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းကိုသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား (၂) သည် လူနာလေးပုံတစ်ပုံအား ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်လည်း သွေးပေါင်ချိန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်၊ သွေးချိုကိုထိန်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နှောင့်နှေးတတ်ကြကြောင့်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်အောင် သင့်ကိုသင် ဘယ်လိုကာကွယ်မှုမျိုးကို လုပ်နိုင်ပါသလဲ။ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီသော အစားအသောက်များကို ရှောင်ပါ။ အဆီးနည်းသော အစားအစာ၊ သကြားနည်းသော အစားအစာ၊ ကစီဓာတ်ပါဝင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစုံသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိက သော့ချက်ဖြစ်သော အစားအစားများဖြစ်ပါသည်ဟု ဒေါက်တာ Talwalkar ကဆိုပါသည်။ “အဲဒီတော့ သိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် မဟုတ်တဲ့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပါ၊ အစားအသာက်ကလဲ ဆင်ခြင်မယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလဲ ပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုယင်တော့ ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား (၂) ကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်” ဟု သူကဆိုပါသည်။
ပရာဖူးလ်ကူးမားသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ သူ၏အသက် ၆၃နှစ်တွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကြည့်သောအခါ သူတွင်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိလိုက်ရသည်။ သူတွင် မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမျှ မပြဘဲ ဤကဲ့သို့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရသောအခါ အတော်ပင် အံ့အားသင့်သွားသည်။ ထို့အပြင် သူ၏မိဘများနှင့် သူ၏မွေးချင်းများတွင်လည်း ဆီးချိုရောဂါမရှိကြ။ သို့သော်လည်း ဘဏ်ငွေးကြေးဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကူးမားသည် အမြဲတမ်း စည်းနှင့် ကမ်းနှင့်နေထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် မနက်တိုင်း ၄၅ မိနစ်ခန့် ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျောက်သည်။ ထိုနောက် တစ်နာရီခန့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်သည်။ သူသည် အစားအသောက်ကို များများမစားဘဲ အသင့်အတင့်သာစားသည်။ ထို့အပြင် အဆီများသောအစားအစာနှင့် အချိုကိုရှောင်သည်။ ပြီးလျှင် သူသည် ဆေးသောက်ရန်မည်သည့်အခါမျှ ပျက်သည်ဟူ၍မရှိ။ “စည်းကမ်းတကျ လိုက်နာနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ သွေးချိုဟာပုံမှန်ပါပဲ၊ နေလို့လဲ ကောင်းပါတယ်၊ ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သက်သေပြနိုင်ပါတယ် “ဟုသူကပြောပါသည်။
တကယ်တော့ ဆီးချိုရောဂါကြောင်း ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးသွားစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ရောဂါကို စောစီးစွာ စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ပြီး၊ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံကို မျှမျှတတနှင့်ရိုးရိုးသားနေထိုင်ကာ လိုအပ်လျှင် ဆေးများသောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဆီးချိုရောဂါသည်များသည် တစ်ခြားပုဂ္ဂိုလ်များ အသက်တမ်းရှည်ရှည် နေနိုင်သကဲ့သို့ နေနိုင်ကြောင်း လုံးဝမျှော်လင့်ချက်ထားနိုင်ပါသည်။
၂၀၀၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ Reader’s Digest မှ SANDHYA SRINIVASAN ၏ Are YouaDiabetic ကို ပြန်ဆိုပါသည်။ ၁၉၊ ၇၊ ၂၀၁၃။
ဦးမောင်မောင်စိုး+ဒေါ်ခင်ခင်မြိုင်မိသားစု အခန်း တစ်ခန်း လှူဒါန်း
ကွယ်လွန်သူ ဦးကျော်ဇော်နှင့် ဒေါ်မြိုင်၊ ဦးအောင်စိန်တို့အား ရည်စူး၍ ဦးမောင်မောင်စိုး+ ဒေါ်ခင်ခင်မြိုင်၊ သမီး ခင်သန္တာစိုး၊ ခင်သိင်္ဂီစိုး၊ (၉ မိုင်၊ ရန်ကုန်) မိသားစုတို့မှ
ဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒောဘာသ ဦးစီး၍ တည်ထောင်လျက်ရှိသော ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာရှိ မဟာဗောဓိ ပရဟိတမြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ဆောက်လုပ်ဆဲ ဗောဓိရုက္ခမူလအမည်ရှိ (၅) ထပ်ကျောင်းဆောင်၌ အခန်းတစ်ခန်းဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၀၀၀) တိတိကို ၁၈-၂-၂၀၁၄ နေ့ သဒ္ဓါထပ်သန်စွာ လှူဒါန်းပါဝင်သွားပါသဖြင့် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။
နှစ်ဟောင်း ကုန်ဆုံး၍ နှစ်သစ်သို့ တက်လှမ်း ပြောင်းလဲခြင်းကိုပင် သင်္ကြန္တ၊ (=သင်္ကြန်)ဟု ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။သူရိယသိဒ္ဓန္တခေါ် ပက္ခဒိန်စံနစ်အရ -Solar year ဟုခေါ်ရမည့် တနှစ်စီတွင် ကမ္ဘာက နေကို ပတ်လှည့်ရာတွင် - တပတ်စေ့မြောက်၍၊ နောက်တကြိမ် အပတ်သစ်စတင်လိုက်ချိန်သည် စင်စစ် မျက်စိတမှိတ် လျှပ်တပြက်၏ အပုံတထောင်ပုံ တပုံအတွင်းခန့်သာ ကြာမြင့်သည်။ ထိုခဏငယ်ကိုပင် သင်င်္ကြန်မင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းအဖြစ်လည်းကောင်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ပြီး-သင်္ကြန်ယဉ်ကျေးမှုကို လူမျိုးတိုင်း၊ တိုင်းပြည်တိုင်းတွင် တနည်းမဟုတ် တနည်း၊ သူ့ပက္ခဒိန်နှင့် သူကျင်းပကြသည်။ မြန်မာ၊ ရခိုင်တို့၏ အတာရိုးရာ ရေသဘင် သင်္ကြန်ပွဲတော်သည်ပင် သူတို့တွေ အလုပ်-သွားလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ထောင့်အသီးသီးသို့ (ယောင်နောက် ဆံထုံးပါဆိုသလို) ခြေဆန့်ခဲသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တွေနှင့်ပင် ချီခဲ့ပါပြီ။ ပြည်တွင်းမှာ စည်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်းဟု သတင်းတွေအရ သိရသည့် တချိန်တည်းတွင် ပြည်ပ-ကမ္ဘာ့ရွာကြီး၏ ရပ်ကွက်အသီးသီး၊ အိမ်ဝိုင်း မြက်ခင်းပြင် အလျှိုလျှိုတွေပေါ်တွင်လည်း သင်္ကြန်မင်းကို ဖြန့်ခင်းမှု-ပုံစံမျိုးစုံတို့ဖြင့် အဟုတ်ကြိုနေကြပါပြီ။ နံ့သာသွေးသံ တရှဲရှဲ၊ ကရာအိုကေသံစဉ် စူးရဲရဲဖြင့်တမျိုး၊ မုံ့လုံးရေပေါ်မှအစ အကျွေးအမွေးမျိုးစုံ၊ ယိမ်းအက၊ ရိုးရာသံစဉ်၊ သံချပ်မျိုးစုံမှသည် … ဂလိုဘယ်လစ် ပေါ့ပ်၊ ရော့ခ် ဟစ်-ဟော့ပ်၊ ပေါက်ကွဲသံစဉ်မျိုးစုံတို့ဖြင့် ယခုရက်ပိုင်းတချိန်လုံးသည် ဘ၀က်အထိ ညံစီခဲ့ပါပြီ။ အားလုံးကောင်းပါသည်။ အထူးသဖြင့် အပြောင်းအလဲတရပ်ကို မရှိမဖြစ်ဆိုသလို အားဂျန့်ဖြစ်လာနေသော မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက် ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်း မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကြီးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ ဆုလည်းတောင်းပါ၏၊ သို့ရာတွင် ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်ဖို့အရေးမှာတော့ ကာယကံ့ရှင် သင်္ကြန်မင်းကြီးရဲ့ အားလုံးသော မန်ဒပ်တွေထဲက သားတော်၊ သမီးတော်အပေါင်းနဲ့သာ အများကြီးဆိုင်ပါကြောင်း…
-သင့်စိတ်ကို သင်သာ အသိဆုံးဖြစ်၍ -ပြောင်းလဲတန်က ပြောင်း၊ လိုအပ်က နောင်းအောင် ခိုင်အောင် - ပိုတည်ဆောက်။
သင့်လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း သင်သာ အပိုင်ဆိုင်ဆုံးဖြစ်၍ - မူပြောင်းတန်က ပြောင်း၊ အလုပ်ပြောင်းတန်က ပြောင်း၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ စိုက်ထုတ်တန်သေးက ထုတ် -
ဤနှစ်ချက် သင့်ဖက်မှ ဖြည့်စွမ်းနိုင်က မုချ သစ်လွင်တောက်ပ လှပသည့် သင့်ဘ၀ ယခုနှစ်သစ်ကစ၍ ပြောင်းပြီသာ မှတ်ပါတော့။ ထို့ထက်လည်း သင်ပြောင်းလိုက်သည့်အတွက် အာဏာရှင်စံနစ်အောက် ငြိမ်ပိဝပ်ပြား လျားလျားမှောက်လာခဲ့သည့် ရာစုထက်ဝက်ကျော် သင့်နိုင်ငံတော်ကြီးသည်လည်း ယင်း၏ အမွတ်သိပ်ဆုံး ချင်ခြင်တပ်နေသည့် မဟာအပြောင်းအလဲကြီးနှင့် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ တိုးတော့အံ၊ သင်တို့တထွေ လာမည့်လာမည့် သင်္ကြန်တွေမှာ ကျု့ပ်တို့အနေ ဆုမချွေလည်း - အခုနှစ်ထက်စည်၍… ကပေတော့.. ၊ ခုန်ပေတော့ … … ဒေါင်းအိုတဝေေ၀နဲ့ …. ချွန်လေလေ … မြ ။ ။
ဗောဓိသုခပရဟိတနှင့် မဟာဗောဓိပရဟိတ မြန်မာကျောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ။
သည်ဓါတ်ပုံတွေကတော့ - အာဖဂနစ္စတန် တောပိုင်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြီးတော့ တာလီဘန်တွေရဲ့ ဘာသာရေးအယူသည်းမှု၊ ဘာသာရေးအရ ဆတ်ဆတ်ထိမခံမှုတွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ အာဖဂန်ရဲ့ ဘာမီးယန်ဒေသက (၂၀၀၀ ပြည့်၊ ဇန္န၀ါရီမှာ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့) ဧရာမ ရှေးဟောင်း ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကြီး နှစ်ဆူ ကိန်းဝပ်တော်မူခဲ့တဲ့ ကျောက်တောင်ခေါင်းကြီး တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာဟာ အခုဆိုရင် (၁၃) နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေရဲ့ အနာဂါတ်ကြမ္မာ ဘယ်လိုနေဦးမလည်း၊ အခုအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ၊ မရေမရာ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ရမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
- တစ်ချိန်တုန်းက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေ ကိန်းဝပ်တည်ရှိခဲ့တဲ့ ကျောက်တောင်စောင်းကြီးရဲ့ အခေါင်းပေါက်တွေကို သည်အတိုင်းပဲ အခွံသက်သက်ထားရစ်ကြမှာလား၊
- ဒါမှမဟုတ် အဲသည်ရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေရဲ့ ရုပ်ကြွင်းဖြစ်တဲ့ မူလအပျက်အစီး အပိုင်းအစတွေနဲ့ ရုပ်ပွါးတော် အသစ်တွေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး ပူဇော်ကြမှာလား၊
- အဲသည် ရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေရဲ့ ပုံတူကို ကူးယူပြီး (တခြားတစ်နေရာဆီမှာသွား) တည်ဆောက်ကြမလား ဆိုပြီး မဝေခွဲ၊ မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေကြတာပါ။
အခုနှစ်ပိုင်းကာလတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်လာတာကတော့ အာဖဂနစ္စတန်နဲ့သူ့ ကိုထောက်ခံတဲ့ အနောက်အုပ်စု နိုင်ငံတွေကြားမှာ အမြင်၊ အယူ သဘောထားတွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းအောင်ပဲ ကွဲလွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ပုံစံနဲ့ ပဲ တည်ဆောက် တည်ဆောက် ငွေကြေးထည့်ဝင်ကျခံပေးမည့် အလှူ့ ရှင်နိုင်ငံအများစုရဲ့ အပြောကတော့ - ဘုရားနေရာကို နဂိုမူလ အပျက်အစီးအတိုင်းပဲ ထားဦးမယ်၊ အနည်းဆုံး (နိုင်ငံရေးအရ လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိသေးတဲ့) အခု လက်ရှိအချိန်အထိ ဆက်ထားဦးမယ်ဆိုပါတယ်။ အာဖဂန်အစိုးရကတော့ အနည်းဆုံး ရုပ်ပွါးတော်တစ်ဆူ (လောလောဆည်မှာတင်) တည်ဆောက်ဖို့ လိုလားနေပါတယ်။ ဘုရားပြန်လည် တည်ဆောက်ရင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမည့် အနေအထားမှာ ရှိနေဆဲပဲဆိုတဲ့ တာလီဘန်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်မှာ သာဓကဆောင်နိုင်တဲ့ အောင်နိုင်မှုတစ်ရပ်ကို အစိုးရက ပြသချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မူလရုပ်ပွါးတော်ကြီးများမှ ကြွင်းကျန်ရစ်သည့် အပိုင်းအစအချို့မှာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် သုံးရအောင် မလုံလောက်နိုင်သဖြင့် အသစ်ထုတ်လုပ်-ထုဆစ်ရမည့် ကျောက်သားများက မူလ-အပိုင်းအစများထက် ပိုများရမည့်အခြေနေတွင် အမှန်တကယ် သမိုင်းရုပ်ကြွင်းဟု မဆိုနိုင်တော့မည်ကိုလည်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး - ရံပုံငွေ စုဆောင်းနေကြသူတွေက စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလေးပေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မူသဘောတရားကတော့ တည်ငြိမ်မှု (စိတ်ချရဖွယ်) မရှိတဲ့ အထင်ကရ -ကမ္ဘာ့အမွေ -သင်္ကေတကြီးတွေ တည်ငြိမ်ခြေရှိလာစေရေးပါပဲ တဲ့။ ကုလသမဂ္ဂ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ကြီး ယူနက်စကို အရာရှိ Brandan Cassar ရဲ့ အပြောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကနေ ကိုးရောက်တဲ့အထိ တစ်ဆင့်ချင်း တစ်လှမ်းချင်းသွားတဲ့အခါ အလေးအနက်ထားပြီးတော့သာ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည်လည် တည်ဆောက်ရေးဆိုတာဟာ နေရာလွဲဖြစ်မှာပါပဲ။ အနောက်ဖက်က ဂူရဲ့ အခေါင်းလေးတွေ အဆင့်လေးတွေပေါ်ကို ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲတွေဟာ ပုံမှန်ကျဆင်းလာနေတာဟာ အန္တရယ်ရှိတဲ့ အနေအထားနဲ့ပြိုကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ရှေးဟောင်းရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေကို ဖြိုဖျက်တဲ့အခါ တာလီဘန်တွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ အားပြင်းလှတဲ့ အမြောက်လက်နက်ကြီးတွေ သုံးခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထား တစိတ်တပိုင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟု သူကဆက်ပြောပါတယ်။ အခြေခံလုပ်ငန်း ရေတိုပိုင်းတွင်ပင် အလှူ့ရှင်တွေဆီက ထည့်ဝင်စုဆောင်းရမယ့် ရံပုံငွေပမာဏဟာ အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခုနှစ်သိန်းရှိပါတယ်ဟု Cassar က ဆိုပါတယ်။ (ကျွန်တော်တို့ ယူနက်စကိုအဖွဲ့ ကြီးရဲ့ အနေအထားကတော့ မြင်းရှေ့ ကို လှည်းက ပိုရောက် (နွားရှေ့ ထွန်ကျူး) ဖြစ်နေတဲ့ ပုံပေါ်နေတာပါ။ (ဒါ့ကြောင့်) အနာဂါတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အခွင့်လမ်းတွေ အားလုံးကို ဖွင့်ပေး(ကာကွယ်) ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဟုပင် သူက ဆိုပါတယ်။ ပါမောက္ခ Petzet ရဲ့ပြောပုံကတော့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အရင်တုန်းက ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ဆောက်လုပ်ရေး ပုံစံတွေအတိုင်းပဲ ဖြစ်မှာပါ။ မပြောင်းလဲပါဘူး။ (အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့) အီတလီနိုင်ငံ Assisi ဒေသထဲမှာ မြေငလျင်ကြီးလှုပ်ခဲ့လို့ ပျက်ပြိုခဲ့ရတဲ့ မှန်စီ၊ ကျောက်စီတွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံ..ဒါမှမဟုတ် ရောမဟန် အစိတ်အပိုင်းတွေကို စုဆောင်းဖို့ ကြိုးပမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်) ဟု ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာရှင်တချို့ က တခြားသော အစီစဉ် (ပရိုဂျက်) အပေါ် ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
Ref: NYT NEWS SERVICE , The Times of India, Times Global , Monday, March 24,2014
(ဒေါက်တာ အမ္ဘေဒကာ၏ ၁၂၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့)
ယနေ့ (၂၀၁၄၊ ဧပြီလ (၁၄) ရက်တွင်)ကျရောက်သည့် ဒေါက်တာ အမ္ဘေဒကာ၏ ၁၂၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနားများကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးတွင် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျင်းပလျှက်ရှိကြပါသည်။ တခြားနိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၊ ၀န်ကြီးချုပ်တို့ ခေါင်းဆောင်သည့် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှလည်း အိန္ဒိယပါလီမန် ပရိဝုဏ်ထဲရှိ ခန်းနားထည်ဝါလှသော အမ္ဘေဒကာ ရုပ်တုကြီး၏ ရှေးမှောက်တွင် တရိုတသေ၊ မြတ်နိုးလေးနက်စွာဖြင့် ပူဇော်ဂါရ၀ပြုကြပါလိမ့်မည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တနံတလျားတွင် နေရာအနှံ့ အပြား၌ အမ္ဘေဒကာရုပ်တု၊ ပန်းခြံ၊ စာသင်ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်ကောလိပ် စသည်ဖြင့် အထိမ်းအမှတ်တွေ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ တွေ့မြင်နိုင်ပါ၏။ သို့မျှဖြင့်လည်း တင်းတိမ်နိုင်ခြင်း မရှိကြသည့်အလား အိန္ဒိယပြည်သူများသည် မိမိတို့ အိမ်များတွင်ပင် အမ္ဘေဒကာ ရုပ်ပုံ၊ ရုပ်တုများထားရှိကာ နတ်ဘုရားတစ်ပါးနှင့်မခြား ဦးညွတ်ပူဇော်လိုက်ကြသေးသည်။ စင်စစ်.. ဤမျှအဖြစ်သည်းရအောင်လည်း သူတို့တွေမှာ အကြောင်းတရားက ရှိပါပေသည်။
နှစ်ပေါင်းသုံးရာခန့် သူ့ ကျွန်ဘ၀ဖြင့် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေ၍၊ အောက်ကျနောက်ကျ နေလာခဲ့ရသည့် အိန္ဒိယပြည်သူလူထုကြီးသည် ၁၉၄၇၊ သြဂုတ် (၁၄) တွင် လွတ်လပ်ရေး အောင်ပွဲခံ၍ အန္ဒိယနိုင်ငံတော်အလံကို လွှင့်ထူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတော် အလံတွင် ပါရှိသည့် နိုင်ငံတော် တံဆိပ် အမှတ်အသားများ၊ သုံးရောင်ခြည် အလံတော်၏ အရောင်နှင့် အဓိပ္ပါယ်တို့ကို ထည့်သွင်း၊ ဖွင့်ဆိုပေးခဲ့သူမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေကို ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဒေါက်တာ အမ္ဘေဒကာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဖွဲ့ စည်းပုံ ဥပဒေ အခြေခံ-မူဝါဒများကို ချမှတ်သည့်အခါ - လူတိုင်း တိုးတက်ကြီးပွါးချမ်းသာ၍ တန်းတူအခွင့်ရေးများ ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံခြုံစိတ်ချရခြင်းစသည်တိုို့ကို ပဓာနပြု၍၊ အာမခံချက်ရှိသော မူဝါဒများ ပါဝင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
သူ့ဘ၀ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်ကြည့်သော် - ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေကြီး၏ ပိသုကာဖြစ်သလို - လူ့အခွင့်ရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့မြင်ကြရပါလိမ့်မည်။ ၁၉၂၃ - တွင် Bahishkrit Hitakarini Sabha - မည်သော တောင်သူ၊ လယ်သမားများ အကျုိုးဆောင် အစည်းအရုံကြီးကို ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်ပြီး၊ မရှိဆင်းရဲ၊ အနှိမ်ခံ အချိုးခံ နင်းပြားပြည်သူ့အလွှာတရပ်လုံး ကုန်းရုန်းထနိုင်ပြီး စီးပွါးရေး ဦးမော့လာစေရေးနှင့်၊ ဤအလွှာအတွက် အစဉ်အလာလိုဖြစ်နေခဲ့သည့် အပိတ်ခံ၊ မှောင်ချခံထားရသည့် လူတိုင်း စာတတ်မြောက်အောင် ပညာသင်ယူခွင့်ရရေး ဦးတည်ချက်များကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ ဦးတည်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ အလားတူ Public Chowda lake ဆိုသော အများသုံးရေကန်ထဲမှ ရေလေးကိုပင် ထိတွေ့၊ မြည်းစမ်းခွင့်မျှ မရရှိကြရှာသော ဇာတ်နိမ့်လူထုကြီးအတွက် အနှိမ်ခံ ဇာတ်နိမ့်များလည်း လူသားတွေပင်ဖြစ်သဖြင့် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရေးအတွက် -မဟာရာစထရာပြည်နယ် မဟာဒ်မှ စတင်၍ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့ရာ၊ ဒေါက်တာ အမ်ဘေဒကာသည် ယင်းကို သက်စွန့် ကြိုးပမ်း၍ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်မချည်းမနှောင်း - (၁၉၃) တွင်၊ မဟာရာစထရာပြည်နယ်၊ Nashik ရှိ Kalaram မည်သော ဘုရားကျောင်းသို့ ဇာတ်နိမ့်များ တန်းတူ ၀င်ရောက်ပူဇော်ခွင့် (ဘုရားကျောင်း ၀င်ရောက်ရေး) ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးတွင်လည်း ဇာတ်နိမ့်လူအုပ်ကြီးကို ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြန်သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုများမှာ စစ်မှန်သော လူ့ အခွင့်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ တရားမျှတရေးအတွက် ယင်း၏ကြိုးပမ်းမှုများပင်ဖြစ်ကြသည်။
အောက်တန်းနင်းပြား ဆင်းရဲသားအလွှာကြီး၏ သုက္ခဒုက္ခတွေမှန်သမျှကို နိုင်ငံရေးအရ အာဏာပါဝါ ရယူ ဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်းတခုတည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။ လူ့အဖွဲ့ စည်းကြီးရဲ့ ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ မျက်နှာစာအသီးသီးမှာလည်းပဲ လူ့ အခွင့်အရေးတွေကို တန်းတူရည်တူ ရယူထားနိုင်ကြဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ် ဟုဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ - တွင် Vicery အမှုဆေင်ကောင်စီတွင် သူနေရာရပြီး ကောင်စီဝင်လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကလည်း ဇာတ်နိမ့်ဆင်းရဲသားများအတွက် အကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် တရားဝင်အခွင့်အလမ်းများကို ဥပဒေကြောင်းအရ ထည့်သွင်းရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။
အခြေခံ လူ့ အခွင့်ရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် သူ့ ၏ကျယ်ပြန့် သော အသိပေးဖြန့်ဝေမှုများကို တသမတ်တည်း စူးစိုက်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ - လူမှုရေးလွတ်လပ်မှု၊ ဇာတ်ခွဲခြားရေး ပပျောက် ညီမျှရေးနှင့်၊ လူဆင်းရဲတွေ လူမွေးလူတောင် ပြောင်ရေး တို့ ပင်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံအား အလေးအနက်ထား၍ စီစစ်လေ့လာခဲ့ပြီးနောက် သိပ္ဗံနည်းကျခြင်းနှင့် ကြောင်းကျိုးဆီလျှော်ခြင်း ဆိုသည့် အားသာချက် နှစ်ရပ်ပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သူရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၁၉ ၅၆ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း နာဂပူမြို့၌ ဇာတ်နိမ့်လူမျိုး ၅ သိန်းကျော်ကို ဦးဆောင်ကာ ကုသီနာရုံဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဦးစန္ဒြမဏိ အထံတော်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ခံယူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ဘ၀ဆည်းဆာချိန်အထိ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကို လှုပ်ရှားရင်း သူ့၏ တန်ဖိုးရှိလှသော အချိန်အများစုကို ကုန်လွန်စေခဲ့ပေသည်။ ပြည်သူများက သူ့ ကို တခြားခေါင်းဆောင်တွေထက်ပင် ပိုအလေးထား ကြည်ညိုကြသလို နိုင်ငံတော် အစိုးရမှလည်း သူကွယ်လွန်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် (၁၉၉၀) နှစ်တွင်ပင် ဘာရတ်ရတနာ မည်သည့် နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ချီးမြှင့်ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသေးသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမ်ဘေဒကာဆိုသည့် တော်လှန်ရေးနှင့် သူတော်စင် သင်္ကေတမျက်လုံးအစုံသည် အကဲမရနိုင်အောင် အဟုန်ပြင်းစွာ စီးမျောနေဆဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးအား စီးမိုးစူးစိုက်နေပြီး ပြည်သူများနှင့် အတူရှိနေလိမ့်ဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဦးကိုကိုလေး + ဒေါက်တာ ဒေါ်အေးအေးနွယ် မိသားစု အခန်းတစ်ခန်းလှူဒါန်း
(အမှတ်(၄၂၉) ၄၈ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊
ဒဂုံမြိူ့သစ် မြောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့) မိသားစုတို့မှ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့၊ ဗောဓိသုခပရဟိတမြန်မာကျောင်း ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒောဘာသ ဦးဆောင်ဆောင် ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသော ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာရှိ မဟာဗောဓိပရဟိတမြန်မာကျောင်းတိုက်၏ ဗောဓိရုက္ခမူလအမည်ရှိ (၅)ထပ် ကျောင်းဆောင်တော်ကြီး ဆောက်လုပ်ရာတွင် အခန်း (၁) ခန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၀၀၀) တိတိကို လှူဒါန်းပါဝင်သဖြင့် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။
မုံဘိုင်းမြို့မှ သွားဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆူဆန်လိုဘုိုသည် အသည်းရောဂါကူးစက်မှုခံရပြီး ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာပင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ အကြောင်းမှာ -ဆူဆန်သည် လူနာတစ်ဦးအား သွားသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးခဲ့စဉ် ထွက်ကျလာသည့် သွေးမှတဆင့် ဗုိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အသက် (၄၀) ပင်မပြည့်သေးသည့် လက်ခနောင်းမြို့မှ ထမင်းချက်အလုပ်သမား ဟာရီလား ဆိုသူအားလည်း အလားတူ အသည်းရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတင်ခဲ့ရသည်။ သူ့မှာ လိင်ဆက်ဆံမှုမှတစ်ဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဟာရီလားတစ်ယောက် ဆေးရုံမှဆင်းပြီး အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသော်လည်း အမြဲတမ်း ပင်မောပန်းနေခဲ့သည်။ သူ့နှင့်အနေ နီးကပ်သူများအား ကူးစက်နိုင်သည့် ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သူအဖြစ်ဖြင့် တစ်သက်လုံးရှိနေပါလိမ့်ဦးမည်။
ဥတ္တာပရာဒေ့ရှေ့်ပြည်နယ် ဘဒ္ဓဂွန်ရွာမှရွာသား (၅၂) ဦးတို့အားလည်း အသည်းရောဂါ ကူးစက်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွါးရခြင်း၏အကြောင်းတရားမှာ - ဒေသခံဒေါက်တာတစ်ဦးက အဖန်ဖန် အသုံးပြုနေသည့် ဘီရောဂါပိုး ပါဝင်သောဆေးထိုးအပ်မှတဆင့် ဗိုင်းရပ်ပိုးများ ကူးစက်မှုကိုခံခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယတွင် အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါထက် ပိုမိုအသေအပျောက်များသည့် ကပ်ရောဂါဆိုးဝေဒနာရှင်များမှာ အသည်းရောင် ဘီပိုးရောဂါ၏ သားကောင်ဝေဒနာရှင်များပင်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်သိန်းမျှသောအိန္ဒိယနိုင်ငံသားများသည် နှစ်စဉ်ဆိုသလို ဤရောဂါဖြင့်သေဆုံးကြရသည်။ သန်းပေါင်း လေးဆယ်မျှသော အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားများသည် ဤရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုးသယ်ဆောင်သူများဖြစ်ကြသည်။ နယူဒေလီ - ဂျီဘီပန့်ဆေးရုံကြီးမှ ပါမောက္ခဒေါက်တာအက်စ်ကေဆာရင်းက - အဲဒီအသံတိတ် လူသတ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လူတွေကိုပညာပေးသင့်ပါတယ်ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဘီပိုးဗုိုင်းရပ်စ်သည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်ခဲသည်။ ရောဂါခံစားနေရသူများအနက် တစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်သော ဝေဒနာရှင်များမှာ ဆူဆန်လိုဘိုတို့ကဲ့သို့ စောစီးစွာ အသက်ဆုံးရှုံးကြရသည်။--အများစုမှာ ထာဝရဘီပိုးဝေဒနာ ရှင်တွေဖြစ်နေရတော့သည်။ ယင်းထာဝရဘီပိုးဝေဒနာရှင်များသည် နောက်ဆုံး၌ အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ၊ အသည်းခြောက်ရောဂါ၊ အသည်းကင်ဆာရောဂါတို့ဖြင့် သေဆုံးရတော့သည်။ များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ကိုယ်ခံပြီးစံနစ် (အရံအသင့် -ကာကွယ်ရေးစံနစ်) တိုက်စစ်က ဘီပိုးကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါ၏။ သို့တိုင် ဘီပိုး- ဗိုင်းရပ်စ်ကလူနာ၏ သွေးစီးကြောင်းတွေထဲတွင် ငုပ်လျိုး၍နေနိုင်ပြီး၊ တချိန်တွင် ဝေဒနာရှင်သည် ဗိုင်းရပ်စ်သယ်ဆောင်သူဖြစ်လာပါတော့သည်။ ၇၅ရာခိုင်နှုန်းသော ဘီပိုးဝေဒနာရှင်များမှာ ဘာလက္ခဏာမှ ပြသမှုမရှိသလို ဘာမှလည်းကိုက်ခဲခံစားရမှုမျိုးမရှိပါဟု ဘုံဘေဆေးရုံနှင့်ဆေးသုတေသနစင်တာ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒီပအမရာပူကား (Dr. Deepak Amarapurkar) ကရှင်းပြသည်။
ဖြစ်သွားသည်ဟု ဘုံဘေဆေးရုံနှင့်ဆေးသိပ္ဗံသုတေသနစင်တာမှ Hepatologist ဒေါက်တာဂီတာမာကန်ဘီလာ (Dr. Geeta Malkan-Billa) မှရှင်းပြသည်။
ရောဂါရရှိသူမှာ အသက်ငယ်သည်နှင့်အမျှအခြေအနေက ပိုဆိုးလေဖြစ်သည်။ဘီပိုးရောဂါရှိသူမိခင်မှ မွေးဖွားလာသော ကလေးတိုင်းလိုလိုဘီပိုးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းကိုခံရလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင်အသက် (၅) နှစ်နှင့်အထက် (သို့မဟုတ်) အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကိုကူးစက်နှုန်းမှာ (၅) ရာခုိုင်နှုန်းမျှသာရှိသည်။
ဒေါက်တာတချို့နှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်သားတချို့ကတော့တီဗီရောဂါနှင့်ဝမ်းရောဂါဖြင့်အများဆုံးသေပျောက်နေသည့် ဆင်းရဲသား၇၀ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်သည့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် “ကမ္ဘာတစ်လွှားဘီပိုးရောဂါပပျောက်ရေး” ဆိုသောစကားမှာ အလွန် အလှမ်းဝေးသေးသည်ဟုယူဆသည်။ ဆင်းရဲသားအများစုမှာ ပိုက်ဆံငွေးကြေး မတတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ ယင်းသို့မတတ်နိုင်သောကြောင့် ဘီ-ပိုးဗိုင်းရပ်စ်ရှိသူ မိခင်များမှ မွေးဖွားလာသောကလေးများကိုသာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပေတော့သည်။ ယင်းကလေးများကို မိခင်မှရောဂါကူးစက်မှု အများကြီး အခွင့်အလမ်း ရှိသောကြောင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသမှမိခင်အများစုမှာ သူတို့၏ နေအိမ်၌သာ ကလေးမွေးကြသောကြောင့်ကလေးငယ်အများစုအားကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့မှာအလွန်မလွယ်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
သို့ဖြစ်၍ မိခင်မှာ ဘီပိုးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ မွေးကတည်းက ကလေးငယ်အား ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထား ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကလေးငယ်များသည် ကျွနု်တို့၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာ S.K. Sarin ကဆိုပါသည်။
၁၉၉၁ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) က တရုတ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ မော်လဒိုက်၊ ဘူတန်နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံများတွင် ကလေးလူငယ်တိုင်းအား ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အကြံပြုချက်ကို လိုက်နာသည့်အနေဖြင့် ၄င်းနိုင်ငံများက တမျိုးသားလုံး ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ထိုးရေးအစီအစဉ်များကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းနိုင်ငံများအနက် တစ်ချို့နိုင်ငံများ ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကို ယခုအခါရရှိခံစားနေရပြီဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၂ ခုနှစ်၌ လူတစ်သိန်းလျှင် ဘီပိုးရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၃၂ ဦးရှိခဲ့ရာမှ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဘီပိုးရောဂါဖြင့်သေဆုံးသူ ၁၄ ဦးသာရှိတော့သည်။
IT နည်းပညာရှင်တစ်ဦး သေပြီးနှစ်လကြာပြီးမှ အသက်ပြန်ရှင်လာ
ကိုးလ်ကတ္တားမြို့မှ IT နည်းပညာရှင်တစ်ဦးကို နယူးဒေလီမြို့မှ ဆရာဝန်တွေက အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပြီး ကယ်တင်ပေးနိုင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီ IT ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့လူနာဟာ ကနေဒါနိုင်ငံရှိ သူတက်ရောက်ကုသနေတဲ့ ဆေးရုံက သူ့ကိုသေပြီလို့တရားဝင် ကြေငြာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူနာရဲ့နာမည်မှာ Asok Debnath ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဦးနှောက်အလုပ်မလုပ်ဘဲ သီတင်းပတ်များစွာကြာသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။
သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူက ကနေဒါနိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေကလက်လျော့လိုက်တဲ့အတွက် သူ့ကို လေယာဉ်နဲ့အရေးပေါ်ယူလာခဲ့ပြီး မက်စ်ဆေးရုံကိုတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ “ ကျွန်မယောက်ျားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကတည်းက ကနေဒါနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်၊ အောက်တိုဘာလရောက်တော့ သူဟာအဖျားဝင်လာပြီး ခေါင်းတွေကိုက်၊ နောက်ကြောတွေ ပြီးတော့ လည်ပင်းတွေကိုက်ခဲနာကျင်ပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နောက်ဆုံးသူဟာ လမ်းလျောက်လို့မရဘူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့က သူ့ကိုဒေသဆေးရုံတစ်ရုံမှာသွားပြပါတယ်၊ အဲဒီမှာဆရာတွေက သူ့ဦးနှောက်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တာကို စစ်ဆေးကြည့်ပါတယ်” လို့ဇနီးဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ အဆော့(က)ရဲ့အခြေအနေဟာ ပိုပြီးဆိုးရွားလာကာ နောက်ဆုံးမှာ သူဟာသတိလုံးဝမရတော့ဘဲ မေ့မျော့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက အဲဒီမှာသူ့ကို ရက်ပေါင်း ၂၀လောက်ထိ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ကုသကြပေမယ့် သူဟာတိုးတက်မှုတစ်စုံတရာ ပြမလာခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာအသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကုန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီး သေသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြစ်ချက်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေလီရောက်တဲ့အခါ သူ့ကို သနံရည်ကုသနည်းနဲ့ကုသကြည့်တဲ့အခါအလုပ်ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဆော့(က)ဟာ နှစ်လခွဲလောက်ထိ လုံးဝမေ့မြောနေတဲ့အခြေအနေကနေ သတိတွေပြန်လည်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲဇနီးဖြစ်သူ အန်ကီတာက လုံးဝအရှုံမပေးဘဲ သူ့ယောက်ျားရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းတွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံကြီးတွေဆီပို့ပြီးအကူအညီတောင်းခံလိုက်တဲ့အခါ နောက်ဆုံးမှာ မက်စ်ဆေးရုံက ဒေါက်တာ ပူးနိတ် အဂ်ရာဝါလ်က အကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရယင် ကျုပ်တို့ဟာ သူ့ကိုအသက်ပြန်ရှင်ပြီ ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ် လုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး၊ ဒီလိုမျိုးရောဂါဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကနေဒါနိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေက မကုသနိုင်တာကို အံ့သြမိပါတယ်”လို့ အဂ်ရာဝါးလ်ကဆိုပါတယ်။ အဆော့(က)ဒီဘနတ်ကို ကုသပေးနိုင်လိုက်တဲ့အတွက် ဦးနှောက်အမြှေးပါးတွေကိုစားပစ်တဲ့ရောဂါကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခု အိန္ဒိယမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ ဒီနည်းက တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ နှစ်လခွဲလောက်အထိ သတိမေ့မျောနေတဲ့အဖြစ်ကနေ အခုအခါမှာ သူဟာသတိတွေ တဖြည်းဖြည်းရလာခဲ့ပါတယ်၊ လောလောဆယ်မှာတော့ သူ့ဟာသတိအပြည့်အ၀ရရှိလာပြီး စကားတွေလည်းပြောလာနိုင်ပါပြီ၊ အစားအသောက်အနေနဲ့လည်း အရည်တွေသောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်၊ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေလည်း လှုပ်ရှားလာနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ် “လို့ဒေါက်တာ အဂ်ရာဝါးလ်ကပြောပြပါတယ်။
သတိရလာပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပေမယ့် အချိန်တော့ အများကြီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “ ဘုရားသခင်က ကျမတို့ဆုတောင်းတာကို အသေအချာနားထောင်ပြီး အသက်ကယ်လိုက်တာဖြစ်မှာပါ “လို့ အန်ကီတာက ၀မ်းသာစွာနဲ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကိုးကား 30/3/14/SUNDAY TIMES
အင်ဂျင်နီယာ ဦးသိန်းထူးအေးနှင့်အဖွဲ့ ခေတ္တ အိမ်ပြန်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့၊ ဗောဓိသုခပရဟိတမြန်မာကျောင်းဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒောဘာသ ဦးစီးပြီး တည်ထောင်လျက်ရှိသော ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာရှိ မဟာဗောဓိပရဟိတမြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ဗောဓိရုက္ခမူလအမည်ရှိ ငါးထပ်ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်ဂျင်နီယာ ဦးသိန်းထူးအေး ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်လျက်ရှိရာ မြေညီထပ်၏ ဆလက်ကို ၂၆-၃-၂၀၁၄ နေ့ အောင်မြင်စွာ လောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အဖွဲ့သည် ဆလက်လောင်းပြီး နောက်တနေ့ ရထားဖြင့် ကိုးလ်ကတ္တားမြို့သို့ လိုက်လာခဲ့သည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်မူ သူတို့အားလုံး အိမ်ပြန်ခဲ့ကြလေပြီ။ အိမ်ပြန်ပြီး သင်္ကြန်လွန်နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ အားလုံးပြန်လာကြမည်ဟု သိရသည်။ အင်ဂျင်နီယာ ဦးသတိးထူးအေးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဘုန်းတော်ကြီးများကို တော်တော် များများ ဆေက်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းထူးအေးအဆိုအရ နောက်လာမည့် ဘုရားဖူးရာသီအတွင်း ၂ ထပ်ခန့် ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်နှုိုင်မည်ဟုဆိုသည်။